En vente actuellement 16/02/2018
Voatabia, ovy, vahona
Inona no ilainny tarehinao ?
Fomba tena be mpanao indrindra ikolokoloana ny tarehy, ny fitaizana azy amina akora voajanahary.
Efa manana olon-tiana izy
« Cocktail » amboarina ao an-trano
Karazana « cocktail » roa mora karakaraina ao an-trano no entina ho anao anio, azo aroso ho anny vahiny, na iarahanny mpianakavy mankafy ao an-trano.
« Crème de banane », ody kohaka natoraly
Akora ilaina : · Akondro masaka tsara 2 · Rano mahamay 400 ml · Tantely 2 sf
Shopping « Homme »
1- Pantalon de marque « Strellson » : 30. 000 Ar, pointure 40, Frip Home Antsakaviro, près de la Faculté des Médecines, vers Ambohijatovo
Fahadisoana 6 tokony ialana rehefa manaingo trano
Misy fahazarantsika Malagasy aminny haingon-trano, tsy mivoaka sady tsy manara-penitra, ka tokony ahitsy. Ny matihanina aminny haingon-trano no tena mahatsikaritra avy hatrany azy ireny, ka izany indrindra no nahatonga ny Jejoo hangataka ny hevitry ny décoratrice dintérieur iray.
Toro hevitra aram-panahy
Tena misy ve ny olona miady aina, ka miandry ny olona tiany vao maty ?
Zavatra fahita matetika ary saiky lasa voamarika hatrany ny hoe tsy maty io raha tsy tonga ny zanany, ny iray tampo aminy, na olona voatondro manokana izay manana fifanakaikezana aminilay olona
Tena marina ve izany?
Mitady mpanafosafo ireo zazakely vao teraka tsy ampy volana ny hôpitaly
15 tapitrisa isan-taona, maneran-tany, no zaza teraka tsy tonga volana, araka ny antontanisa nomenny OMS. Marefo kokoa noho ny zazamenava hafa rehetra izy ireo.
Tovolahy 19 taona, nitifitra sy nahafaty olona 17 tao aminny lisea nianarany
Tovolahy iray 19 taona, mpianatra amina lisea iray ao Florida Etazonia, no nitondra basy ka nitifitra sy nahafaty olona miisa 17, tao aminity sekoly ityn ny marainanny 14 febroary lasa teo.
Namono tena izy rehefa avy namono ny fianakaviany
Novonoini Joseph Nickell, lehilahy 44 taona, taminny alahady lasa teo, ny ray aman-dreniny sy ny olon-tiany ary ny rafozam-baviny, tao Kentuky Etazonia.
Lazainny rahavaviko fa ratsy tarehy be ilay olona miaraka amiko.
In Square Ambatobe : Fali sy ny mpandihiny manomboka aminny 8 ora alina Paf : 15.000Ar Restaurant Art-Gout Ilanivato: Mami Basta sy Ifanihy manomboka aminny 8 ora alina. Paf: 15.000Ar
Tsy mety manao maloto any am-pianarana
Araka ny fanadihadiana iray nataonny OpinionWay taminny ray aman-dreninny mpianatra taminny sekoly iray tany Frantsa, dia marobe ny ankizy tsy mety manao maloto any am-pianarany fa miandry tonga any an-trano vao mivoaka, noho ny lotonny toeram-pivoahana. Mampanahy izany, ho anny toem-pahasalamanny ankizy